तौल घटाउने सजिलो उपाय, यसरी बनाउनुहोस् केराको जुस
कपालको कलर गर्ने महिलाहरुमा घातक रोगको खतरा बढ्ने
मासु खानुहुन्छ ? यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
एजेन्सी । एउटा जवान मान्छेले एक दिनमा २५० ग्राम सम्म मासु खान राम्रो हुन्छ । मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । दुई सय ५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखी ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । थप प्रोटिन अन्य खानाबाट पाइन्छ ।
दिमाग तेजिलो बनाउनका लागि माछा !
काठमाडौं । हाम्रो मस्तिष्कलाई सधैं ताजा र तेज राख्न माछाले मद्दत गर्दछ । हाम्रो मुलुकमा खसी, कुखुरा, भैसी या राँगा र बंगुरको मासु बढी प्रचलित छ । जुन स्वस्थ्यको लागि त्यति उपयोगी मानिंदैन । किनकि त्यस्ता रातो मासुले शरीरमा कुनै न कुनै विकार गरिरहेको हुन्छ ।
गर्मीमा गाँजर खानुका यस्ता फाइदा...
काठमाडौं । हामीले गाँजरलाई प्राय सलादको रुपमा उपयोग गर्छौं र गर्दै आएका पनि छौं । गाँजर खानु आफैंमा स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । विशेष गरेर आँखाको ज्योतिको लागि एकदमैं फदायक मानिने गाँजरले यो भन्दा बाहेकका धेरै कुराहरुमा पनि अतुलनिय सहयोग गर्दछ ।
मेकअप गर्नुअघि अपनाऔं यस्ता सावधानी
महिलाको सौन्दर्यको लागि मेकअप अनिवार्य आवश्यकताजस्तै हो । यद्यपि, मेकअप खाली अनुहारको सौन्दर्यको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुहुन्न । अनुहारको सुरक्षाको लागि समेत मेकअप गरिन्छ
अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण अधिकांश मानिसमा तनाव हुनेगर्छ । यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरु डिप्रेसनको सिकार हुने गरेका छन् । यसर्थ, स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । समयमा सुत्ने–उठ्ने गर्नुपर्छ । सन्तुलित आहारसँगै पर्याप्त मात्रामा आराम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।